Cloud ဟူသည်… | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on November 18, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
ယနေ့ နည်းပညာလောကမှာ လူပြောသူပြောများပြီး လူသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ‘Cloud’ ဆိုတာကို ရှင်းပြလိုပါတယ်။ Cloud ဆိုတာဘာလဲ? Cloud ကို ဘယ်အချိန်မှာ သုံးကြလဲ? Cloud ဟာ သင့်စီးပွားရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလဲ စတာတွေပေါ့။ Facebook, Twitter စတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် Google Drive လိုမျိုး ‘Online Storage’ တစ်ခုခုကို သုံးရင် သင်ဟာ Cloud သုံးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
တကယ်တမ်းကျတော့ Cloud ဆိုတာ…
Cloud ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တကယ်လက်တွေ့ရှိတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ “မတူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသီးသီးရှိတဲ့ Server တွေရဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခု” သာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက အချို့ Server တွေဟာ ‘Computing Power’ ကိုသုံးပြီး App တွေ Run တာနဲ့ အချို့ကတော့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ဥပမာပြရရင် Photoshop, Illustrator စတာတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Adobe ကုမ္ပဏီဆိုရင် သူ့ရဲ့ ‘Creative Service’ တွေကို Cloud ပေါ် ရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Adobe ထုတ်ကုန်တွေကို ၀ယ်ယူလိုရင် Set လိုက်၊ Package လိုက် ၀ယ်စရာမလိုတော့ဘဲ “Adobe Creative Cloud” ကနေ လစဉ်ကြေးပေးပြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုစီကို သုံးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကုန် သက်သာသွားတာပေါ့ဗျာ။
Network ထဲမှာရှိတဲ့ အခြား Server တွေရဲ့ တာဝန်ကတော့ Data (အချက်အလက်)တွေကို သိုလှောင်ဖို့ပါ။ ဥပမာ သင့်စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ အဆိုပါပုံဟာ သင့်ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး Facebook, Instagram လိုမျိုး လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုခုမှာ တင်လိုက်ရင်တော့ သင်ဟာအဲဒီ ဓာတ်ပုံကို ‘Cloud’ ပေါ်တင်လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ‘Cloud’ ဆိုတာ ဆာဗာတွေရဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခုပါပဲ။ အချို့ဆာဗာတွေက အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသလို အချို့ဆာဗာတွေကျတော့ Data အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားပေးပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ Cloud ကို တော်တော်အားထားကြပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Storage များများစားစား ရှိစရာမလိုဘဲနဲ့ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှသာ လိုအပ်တာကို Cloud ပေါ်ကနေ ဆွဲယူသုံးလိုက်ရုံပါပဲ။
Cloud ကိုသုံးလို့ ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုအနေနဲ့ အချက်အလက်ပေါင်းများစွာကို ထားသိုဖို့ Cloud မသုံးဘူးဆိုရင် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေ ၀ယ်တာနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမြင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ Cloud ကိုသုံးလိုက်တော့ စက်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်စရာမလိုတော့ဘဲ Cloud သုံးခပဲ ပေးရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် Cloud ၀န်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ များစွာအလုပ်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်း ငွေကြေးတွေ Save ဖြစ်တာပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်တည်းက Cloud သဘောမျိုး ‘Mainframe’ တစ်ခုကို ပညာရှင်တွေ တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ Mainframe ဟာ အခန်းတစ်ခုစာလောက် ကြီးမားပြီး ဈေးလည်းအရမ်း ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်း(ကုမ္ပဏီ)တွေ အနေနဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို အဆိုပါ Mainframe တွေ ၀ယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် User တွေအများကြီး Data တွေကို ဝေမျှသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ‘Time Sharing’ ဆိုတဲ့စနစ် တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ ‘Cloud’ ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ အဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲ။
Cloud သမိုင်းမှာ နောက်ထပ် အဓိကဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ Developer တစ်ယောက်က ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) ဆိုတဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခု တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Developer ဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ ဘယ်သူမဆို ဘယ်နေရာကို ရောက်ရောက် Data တွေ၊ Program တွေ ရယူသုံးစွဲ နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ သို့သော်အဲဒီကာလတည်းက အင်တာနက်ဟာ Cloud စနစ်သုံးလို့ရလောက်အောင် Bandwidth မရှိခဲ့တာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွေ အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီနေ့ခေတ် နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ပြောနေကြတဲ့ ‘Cloud Computing’ ဆိုတဲ့ အသုံအနှုန်း ဘယ်သူက စတင်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? ၁၉၉၇ ခုနှစ်နဲ့ ၉၉ခုနှစ်တွေမှာ ပါမောက္ခ Ramnath Chellappa ဆိုတဲ့သူက စတင် အသုံးပြုခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာ ပါတဲ့ဗျာ။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ‘Salesforce’ ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ကိုပါ ဖန်တီးခဲ့ပြီး အဲဒီ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဟာ အင်တာနက်ကနေ App တွေ၊ Software တွေရယူလို့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အားလုံးသိကြတဲ့ နာမည်ကြီးအွန်လိုင်း Shopping ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amazon ဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Cloud ကို AWS(Amazon Web Service) လို့နာမည်ပေးပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပွဲထုတ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ AWS ဟာ Amazon တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသော Website တွေ၊ Apps တွေ အတွက်ပါ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်ထိလည်း Instagram လိုမျိုး Pinterest လိုမျိုး လူမှုကွန်ရက်တွေဟာ AWS ကို အားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Amazon ပိုင် AWS ဆိုတဲ့ Cloud အနေနဲ့ ယခုအခါမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ကျော်ရဲ့ Startup ပေါင်းများစွာ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများစွာနဲ့ ချိတ်ဆက်လည်ပတ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Cloud ဆိုတာ ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ Cloud တစ်ခု ပမာဏ ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျမသိပါဘူးတဲ့။ ခန့်မှန်းတွက်ချက် တိုင်းတာမှုတွေအရတော့ Cloud တစ်ခုဟာ 1 Exabyte လောက် ရှိတယ်ဆိုပဲ။ ဒါနဲ့ 1 Exabyte ဆိုတာ ဘယ်လောက်များပါလိမ့်? ဥပမာ ပြထားတာကတော့ 1 Exabyte ဆိုတာ Apple ရဲ့ Macbook Pro အလုံးရေ ၄၂သန်း လောက်ရဲ့ Storage နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဟာ အရမ်းကိုကြီးမားတဲ့ ပမာဏပါ။
Cloud သုံးတာ လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား?
အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ Note တွေရေးမှတ်တာ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို၊ သီချင်း စတာတွေ တင်တာဆိုရင်တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ အရေးကြီးမှတ်တမ်းတွေ၊ ဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးစာရင်းတွေ စတာတွေကို Cloud မှာ သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ သတိကြီးစွာထားရမယ့် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က Hacker တွေကလည်း ဒါမျိုးတွေကိုမှ မျက်စိကျနေတာကိုး။ နာမည်ကျော် Search Engine ကုမ္ပဏီကြီး Google ကလည်း ဒီကိစ္စကို သတိပေးပြောကြားနေကာ ၎င်းတို့ရဲ့ Cloud Service မှာ ပိုက်ဆံပေး အသုံးပြုသူတွေရဲ့ Data ကို အလိုလျောက် Encrypt (၀ှက်စာလုံခြုံရေးစနစ်) ပြုလုပ်ပေးသွားမယ့် အစီအစဉ်ကို ကြေညာထားပါတယ်။ သင်ရော Cloud ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ အသုံးပြုပါသလဲ?
Ref : http://mmconsumerguide.com/what-is-cloud/
← YouTube က သီချင်းတွေ ကို စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းယူနိုင်မယ့် Bigasoft Video Downloader
Symbian OS သုံး Nokia Touch Screen ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပါ (3Mb) →